(QAYBTA – 8-AAD)
Sidoo kale, waxaa Xilka ama mansabka Saldanada Tunni, ku tartamaayay xilligaas wiilashii ay dhaleen Aw Munye Xaaji Cabdulqaadir iyo Aw Faqi Xaaji Awiisa, kuwaa oo kala ahaa: Suufi Munye & Aw Sheego Faqi.
Markii arrintu khilaafkeeda batay, Odayaasha Dhaqankana ay ku adkaatay in ay go’aan ka gaaraan, tanasulna laga waayay tartamayaasha, shacabka Reer Baraawena ay u kala safteen saddexdaa nin oo tol wadaag iyo qaraabo wadaagba ahaa, ayaa lagama maar-maan noqotay in ay Dowladuu soo dhexgasho, go’aan waafaqsan heerarka dhaqanka soomaaliyeed ka gaarto.
Sidaas darteed, waxay Dowladdu go’aamisay in la qabto doorasho guud, qofkii ku guulaysto oo codad aqlabiyad helo loo caleemo saaro Suldaan Tunni oo uu buuxiyo mansabkii uu ka geeriyooday Aw Munye Xaaji Cabdulqaadir, ninkii labaad galona, loo magacaabo Nabadoonka Beesha Dacfaraad.
Goobtii doorashada ka dhacaysay waxay ahayd: Mudun oo ay soo safteen taagerayaasha Xaaji Cunar Sheegow. Goobtii labaad waxay ahayd meel la yiraahdo Mala-laalay, waxaa soo saftay taagerayaasha Suufi Munye iyo Meel Daawoole la yiraahdo oo lagu safay taagerayaasha Aw Sheego Faqi.
Habka iyo nidaamka tirinta dadka saddexdaa goobood isa soo taageen, waxaa ka mas’uul ahaa guddiyada oo ay kala hoggaaminaayay Guddoomiya Gobolka Banaadir iyo Guddoomiyaha Degmada Baraawe (xilliyadaas la oran jiray Governatore Regione Benadir iyo Commissario di Brava). Sidoo kale, doorashada intii ay socotay, waxaa goob joog ka ahaa suxufiyaal ajaanib ah iyo soomaaliba oo daawanaayay habka loo tirinaayay dadkii ka soo qayb galay doorashadaas iyo sida loo kormeeraayay ka qayb galayaasha doorashada Suldaanka Tunni e eka dhacay saddexda goobood oo aan kor ku soo xusay.
Tusaale ahaa: Si looga hortago la iskana ilaaliyo in dadka qaarkii aysan ku noq-noqonin tirinta amaba la soo saarin tiro aan jirin, waxaa la sameeyay nidaam ah in qofkii la tiriyoba laga saaro safka lana geeyo meel ka fog goobta tirinta ka socotay, meeshaasna lagu ilaaliyo ilaa intii uu ka dhamaanaayo tirinta dadka oo dhan, sidaas darteed, natiijooyinka ka soo baxay doorashada shacbiga Reer Baraawe oo dhan raalli ayay ka noqdeen, waxaana la isku waafaqay in ay u dhacday si caddaalad ah, sinnaana ku dheehan tahay.
Waxaa doorashada mansabka Suldaanka Tunni Shangamaas, Tunni Toore iyo Todoba Tolba ku guulaystay Xaaji Cumar Sheegow, isla maalintaas iyo isla goobta ay safnaayeen taagerayaashiisa ayaa lagu caleemo saaray. (Fiiri sawirada oo uu sawir qaade ka ahaa Axmed Jelib oo xilligaas u shaqeenaayay wargeyska la oran jiray ”Corriera della Soomaalia” oo maalin kasta ka soo bixi jiray Wasaaradda Warfaafinta ee Dowladda Soomaaliya (A.F.I.S.).
Kaalinta labaad waxaa galay Suufi Munye oo codada ahaan ka badiyey Aw Sheego Faqi, sidaas darteed, isaguna waxaa loo magacaabay Nabadoonkii Beesha Dacfaraad oo u huwanaa ilaa uu ka dhintay. Sidaas ayeyna ku dhamaatay loolankii iyo halgankii loogu jiray hanashada mansabka Suldaan Tunni, laguna sijilay Diiwaanka Guud ee Dowladda.
Muddo kadib caleemo saarkii Xaaji Cumar Sheegow oo loo caleemo saaray Suldankii Beelaha Tunni Shangamaas, Tunni Toore iyo Todob Tol, waxay Dowladdii Talyaaniga ee Maxmiyad ahayd (AFIS), tabaabusho ugu gashay in ay Maamulka Dalka ku wareejiso soomaalidu, isla markaana waxaa la qaban qaabinaayey in la dhiso Golaha Shacbigu (Legislative Assembly) oo ka kooban 70 kursi, kuwaa oo toban (10) kursi ka mid ah loo qoondeeyey Ajaaniibtii Soomaaliya ku nooleed.
Tusale: JaaliyaddaTalyaaniga & Carabta midkiiba afar (4) kursi ayaa la siiyay. Bakistaaniyiinta iyo Hindida midkiiba la siiyay min hal (1) kursi. Dadka loo dooranaayo Xildhibaan Golaha Shacbigu, waxaa shardi looga dhigay in ay ahaadaan dad ”Af Carabi ama Talyaani” si fiican ugu hadli karaan.
Haddaba, bacdamaa uu Xaaji Cumar Sheegow ka mid ahaa saraakiishii soomaaliyeed ee Italiya wax ku bartay, waxaa sannadku markuu ahaa 1956 loo doortay Xildhibaan Golaha Shacbiga, isagoo ku soo galay, Musharraxna ka ahaa (candidate) Xisbiga SYL ee Degmada Baraawe oo xilligaas SYL ku guuleystay 43 kursi, xisbiga HDM (Digil & Mirifle) wuxuu ku guulestay 13 kursi, saddex kursi waxaa ku guulestay xisbiga Somali Democratic Party, kursi keliyana waxaa ku guuleystay Ururkii Midowga Mareexaan (Marehan Union). Maadaama kuraasida badankoodii ay SYL heshay, waxay soo dhistay Dowladdii ugu horeysay ee ku meel gaarka ahayd, waxaan Ra’iisul Wasaare loo doortay Cabdullaahi Ciise.
Dorashadaas kadib, Xaaji Cumar Sheegow wuxuu la saan qaaday wadcigii Dalka ee markaa jiray oo ahaa madaxbanaanida iyo aaya-ka-talinta ummadda soomaaliyeed, sidaas awgeedna, wuxuu Xaajigu u wareegay dhanka arrimaha siyaasaddii ka socotay waddanka dhexdiisa, laguna loolamaayay Madaxtinimada iyo Hoggaaminta Dalka oo ku dhex jiray ilaa uu ifka ka tegay. Markii labaad oo Xaajigu loo doortay Xildhibaan, waxaa loo doortay Guddoomiye Kuxigeenka Golaha Shacbiga ( Assemblea Nazionale).
Xaaji Cumar sheegow, markii uu ku wareegay siyaasadda, Xildhibaanna noqday, cidna kuma uusan wareejin xilkii uu u haayay Qowmiyadda Reer Baraawe ee Suldaannimada, cid kalena oo damac ka gashay mansabkaas ama u hanqal-taagay ma dhicin. Sidoo kale Xaajiga ilmihiisa waxay ahaayeen saraakiisha Dowladda (Civil Servant), maankoodana kuma jirin haba yaraatee in ay la wareegaan xilka aabahooda ee Saldanada, ha ahaato Xaajigu intii uu noolaa iyo markii uu dhintay intaba.
Sidaas darteed, qof huwan magaca Suldaanka Qowmiyadda Tunni Shangamaas, Toore iyo Todoba Tol, laga waayay masraxada Odayaasha Dhaqanka ee Beelaha Soomaaliyeed muddo ku siman 31 sanadood, laga soo bilaabo sannadkii Xaaji Cumar Sheegow ku biiray ama loo doortay Xildhibaanka Golaha Shacbiga Soomaaliyeed, sababtoo ah dan gaar ah lama siinin(disinterested) mansabkaas oo qiimo iyo qaayoba u lahaa bulsha R/B, sidaasna meel cid la’ ah looga tegay (abandoned) muddada kor ku xusan.
Nasiib wanaag sannadku markuu ahaa 1987, mansabka Saldanada Tunnida mar kale waxay ku soo noqotay makaankeeda. Soomaalida waxay tiraahda: ”Tey Tahay Tagi.” Murtidan waxaa la isticmaalaa marka la tilmaamaayo wax walba inay ku noqonayaan wixii loogu tala galay ama sida uu Eebbeheenu ugu tala galay ee xukman. Waxayna murtidan uu dhaw-dhawdahay maahmaahda Carabiga ah ee tiraahda: ”KULLI SHEY YARJICU ILAA ASLUHU” oo ah wax kasta asalkoodey ku noqonayaa.
BOGGA 1AAD 2AAD 3AAD 4AAD 5aad 6aad 7aad